ဒီနေ့ မိတ်ဆက်သွားမယ့် Redmi ဖုန်းက ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တန်တဲ့ စမတ်ဖုန်း ဖြစ်လာနိုင်သလား ? | MyTech Myanmar
ဒီနေ့ မိတ်ဆက်သွားမယ့် Redmi ဖုန်းက ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တန်တဲ့ စမတ်ဖုန်း ဖြစ်လာနိုင်သလား ?
Xiaomi က အမည်မသိ Redmi စမတ်ဖုန်းကို ဒီနေ့ (ဇန်နဝါရီလ ၁၀ရက်နေ့) မှာ မိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်ပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခုဆိုရင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံက Xiaomi ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ရှုပ်နေပြီ ထင်ပါတယ်။
Xiaomi ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Lei Jun က မျိူးဆက်သစ် Redmi စမတ်ဖုန်းရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတချိူ့ကို တရားဝင် မိတ်မဆက်ခင်မှာ မျှဝေခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။
လက်ရှိ အမည်မသိ Redmi စမတ်ဖုန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တိကျသေချာတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းမှာ 48MP Camera Sensor ပါဝင်လာမယ် ဆိုတာပါပဲ။ ကျောဘက် ကင်မရာအပိုင်းအတွက် Dual Camera Setup ကို အသုံးပြုထားမှာ ဖြစ်ပြီး 48MP Sensor ကိုတော့ Main Camera အဖြစ် တပ်ဆင်ထားမှာပါ။ အရောင်တွေကိုတော့ Black, Blue နဲ့ Pink ဆိုပြီး အရောင် ၃မျိူး ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Xiaomi က အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းကို Redmi X ဆိုပြီး နာမ်စားသုံးထားပေမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ Redmi7ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။ တချိူ့ကလည်း Redmi Note7ဒါမှမဟုတ် Redmi Pro2သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Redmi က သီးသန့်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရပ်တည်တော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီနေ့ကျင်းပမယ့် ပွဲတော်ကြီးမှာ မိတ်ဆက်သွားမယ့် Redmi စမတ်ဖုန်းက တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ ဈေးနှုန်းပါ။ Price-to-Performance ratio မှာ Xiaomi က ဆရာကျလေ့ ရှိတာကြောင့် လူတော်တော်များများကလည်း ဈေးနှုန်းကိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ Redmi X ရဲ့ Specifications တော်တော်များများကို သိရှိထားပြီးဖြစ်ပေမယ့် အရေးကြီးဆုံး အချက်ဖြစ်တဲ့ ဈေးနှုန်းကိုတော့ ခုချိန်ထိ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Xiaomi ရဲ့ CEO ဖြစ်သူ Lei Jun ကတော့ Redmi စီးရီးတွေကို ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့တန်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအမျိူးအစားတွေဖြစ်အောင် အလေးပေး လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
ဒီနေ့ မိတျဆကျသှားမယျ့ Redmi ဖုနျးက ပေးရတဲ့စြေးနဲ့ တနျတဲ့ စမတျဖုနျး ဖွဈလာနိုငျသလား ?
Xiaomi က အမညျမသိ Redmi စမတျဖုနျးကို ဒီနေ့ (ဇနျနဝါရီလ ၁၀ရကျနေ့) မှာ မိတျဆကျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ မိတျဆကျပှဲကို တရုတျနိုငျငံမှာ ကငျြးပသှားမှာဖွဈတဲ့အတှကျ အခုဆိုရငျတော့ တရုတျနိုငျငံက Xiaomi ဝနျထမျးတှေ အလုပျရှုပျနပွေီ ထငျပါတယျ။
Xiaomi ရဲ့ CEO ဖွဈသူ Lei Jun က မြိူးဆကျသဈ Redmi စမတျဖုနျးရဲ့ ဓာတျပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတခြိူ့ကို တရားဝငျ မိတျမဆကျခငျမှာ မြှဝခေဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ အဆိုပါ စမတျဖုနျးရဲ့ အသေးစိတျ အခကျြအလကျတှကေို ဓာတျပုံနဲ့တကှ မကျြဝါးထငျထငျ မွငျတှရေ့တော့မှာပါ။
လကျရှိ အမညျမသိ Redmi စမတျဖုနျးနဲ့ ပတျသတျပွီး တိကသြခြောတဲ့ အကွောငျးအရာကတော့ အဆိုပါ စမတျဖုနျးမှာ 48MP Camera Sensor ပါဝငျလာမယျ ဆိုတာပါပဲ။ ကြောဘကျ ကငျမရာအပိုငျးအတှကျ Dual Camera Setup ကို အသုံးပွုထားမှာ ဖွဈပွီး 48MP Sensor ကိုတော့ Main Camera အဖွဈ တပျဆငျထားမှာပါ။ အရောငျတှကေိုတော့ Black, Blue နဲ့ Pink ဆိုပွီး အရောငျ ၃မြိူး ရှေးခယျြဝယျယူနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Xiaomi က အဆိုပါ စမတျဖုနျးကို Redmi X ဆိုပွီး နာမျစားသုံးထားပမေယျ့ ကြှမျးကငျြသူတှကေတော့ Redmi7ဖွဈနိုငျကွောငျး ခနျ့မှနျးပွောဆိုနကွေပါတယျ။ တခြိူ့ကလညျး Redmi Note7ဒါမှမဟုတျ Redmi Pro2သာ ဖွဈနိုငျကွောငျး သုံးသပျထားပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ Redmi က သီးသနျ့ကုမ်ပဏီအဖွဈ ရပျတညျတော့မှာ ဖွဈတာကွောငျ့ ဒီနကေ့ငျြးပမယျ့ ပှဲတျောကွီးမှာ မိတျဆကျသှားမယျ့ Redmi စမတျဖုနျးက တျောတျောလေး စိတျဝငျစားစရာကောငျးနတောတော့ အမှနျပါပဲ။
နောကျထပျ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာကတော့ စြေးနှုနျးပါ။ Price-to-Performance ratio မှာ Xiaomi က ဆရာကလြေ့ ရှိတာကွောငျ့ လူတျောတျောမြားမြားကလညျး စြေးနှုနျးကိုပဲ စိတျဝငျစားနကွေတာပါ။ Redmi X ရဲ့ Specifications တျောတျောမြားမြားကို သိရှိထားပွီးဖွဈပမေယျ့ အရေးကွီးဆုံး အခကျြဖွဈတဲ့ စြေးနှုနျးကိုတော့ ခုခြိနျထိ အတိအကြ မသိရသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Xiaomi ရဲ့ CEO ဖွဈသူ Lei Jun ကတော့ Redmi စီးရီးတှကေို ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့တနျတဲ့ စမတျဖုနျးအမြိူးအစားတှဖွေဈအောငျ အလေးပေး လုပျဆောငျသှားမယျလို့ ပွောကွားထားပါတယျ။
MyTech Myanmar2019-01-10T11:11:38+06:30January 10th, 2019|Events, Mobile Phones, News, Xiaomi|